Hay Baler, Baler Machine, Rotary Tedder, Wood Chippers, Rotary cajalid jaro - Hualand
hadda soo dukaamaysto
Waxaan ku haysataa-technology Advanced
-Adeeg wax ku ool ah Best
diiradda on tayada
Hay faraha qaadin
Hay Tedder Oo qaadin
GQM125-220 beerfale Rotary
Wood jaba Machine WC-8
GQY125-220 beerfale Rotary
GQN125-220 beerfale Rotary
"WEIFANG HUALAND mishiino CO., LTD" bilaabeen in ganacsiga caalamiga ah ee 2004. line waxyaabaha First ahaa hore preload dhamaadka iyo backhoe for cagaf. In 2006 Huamachinery horumarinta chipper qoryo PTO iyo chipper.Both qoryo naaftada ay si fiican u iibin jiray lifaaqan cagaf world.other lagu soosaaray, sida, gowsa dhammayn, slasher, Gaetano wadada, snowblower.In 2010 Huamachinery OEM mashiinada dhismaha wadada for brazil.And hadda Huamachinery leedahay 5 workshops processing, 3 workshops shirka, workshop 1 dusha daaweynta, 2 dhammeeyey bakhaar alaabta, 2 qaybood bakhaar, 1showroom; 3 waxyaabaha khadadka: mashiinada haying alwaaxa mashiinada ku lifaaqan 3PT for preload cagaf-hor dhamaadka, backhoe, barafka, Gaetano wadada iyo iwm 100 shaqaale ah iyo 6 injineerada ...
baler Hay la 0910C magaabay
GQE120-200 beerfale Rotary
Wood jaba cagaf Hirgeli WC-18/22
baler hay Round RXYK-0890
Model The 2500 waxaa loo isticmaali karaa on cagaf for 18-50hp 1 First lifaaq shirkii ugu weyn ee ay ku xirid saddex dhibcood oo nadiif ah. Marka rakibidda doorashadii Tine, hubi in saa'idka yihiin gudaha biraha dhinaca hoose oo ka mid ah doorashada Tine hub.The ku xiran yihiin iyadoo la isticmaalayo afar handarraabbadeedii. 2 Hubi in t ku ...
Waxaa jira qaar ka mid ah waxyaalaha ka hor samayn inay shaqeeyaan baler mini wareegsan. 1 baler in ay ku xirid saddex dhibic lifaaq. Tani waxay kuu ogolaaneysaa in aad kor u qaadeen oo guurto baler halka fulinta kiniisadda. 2 Waxaad u baahan doontaa inaad dib u soo ceshano qaybo ka mid ah ku kaydsan gudaha qol baler ah. Si aad u soo ceshano qaybo ka mid ah, saar ...